Kucherechedzwa pane Iyo Yakareba Muswe uye YeMimhanzi Indasitiri | Martech Zone
Chitatu, September 27, 2006 Chitatu, July 9, 2014 Douglas Karr
Ndakasangana nevamwe maIndipolis Marketing Vatungamiriri masvondo mashoma apfuura kuti tikurukure Muswe Murefu. Iri ibhuku rakakura uye Chris Anderson munyori anonakidza.
Sezvo iro bhuku rakagovaniswa, vamwe vanhu vakatora pfuti kuna Chris uye nepfungwa yekuti neimwe nzira 'akagadzira' Muswe Murefu. Handifunge kuti Chris akagadzira dzidziso ye Muswe Murefu, asi akaenzanisira zvakanaka.
Mukudya kwedu kwemasikati, vanhu pavakakurukura nezvebhuku iri, ndinofunga vakati wandei vedu vakazoona kuti Muswe Murefu yakanyanya kuita isingadzivisike senge chero imwe indasitiri. Ikoko kwaingove kune vaviri chete vagadziri vemotokari, vashoma vezvinwiwa, vashoma zvemagetsi vagadziri… asi nguva yekuwedzera sekuparadzira nekugadzira matekinoroji akashanduka, kugona kwacho kwakaramba kuchikura. Iyo refu Muswe inenge yakaita se Mutemo waMorey yekugadzira uye kugovera.
Ini ndinofunga iyo indasitiri inonyanya kuzivikanwa neiyi indasitiri yemimhanzi. Makumi mashanu emakore apfuura, pakanga paine mashoma ma studio uye mashoma erekodhi zvinyorwa zvaimbofunga kusarudza kuti ndiani akazvigadzira uye ndiani asina. Ipapo, nhepfenyuro dzakasarudza izvo zvakaridzwa uye izvo zvisiri. Zvisinei nesarudzo yevatengi, kugadzirwa nekuparadzirwa kwemimhanzi kwaive kwakanyanya, kushoma.
Zvino, zviri nyore. Zvangu mwanakomana anonyora, anonyora, anotamba, anorekodha, anosanganisa, uye anoparadzira mimhanzi nemutengo wakaderera kuburikidza neyewebsite yake. Hapana munhu pakati pake nemutengi… hapana. Hapana wekumuudza kuti haakwanise kutora rekodhi dhiri, hapana wekumubhadharisa kuti anyore CD, hapana wekumuudza kuti havazoridza mimhanzi yake. Murume wepakati akagurwa kunze kwemhinduro!
Izvo zvinotyisa kune wepakati murume, asi kune isingaperi mutsara wevanhu akave 'akachekwa' ekuparadzira nekugadzira sezvo nzira dzave dzakachipa uye dzichinyatsoita. Iko kushanduka kwechisikigo. Dambudziko neindasitiri yemimhanzi ndeyekuti paivepo so mari yakawanda iri pakati pemutengi nemuimbi. Kune akawanda mamirionea muindastiri iyo iwe neni tisati tambonzwa nezvayo.
Saka… ko kana muimbi mukuru akaita $ 75ka gore? Ko kana vaine 401k, vaifanira kushanda vhiki rega-rega kuunza kumba bhekoni, vaifanira kutsvaga basa pano nepapo… zvakashata kudaro? Handifungi kudaro. Ndakaziva machinists aive maartist ane lathe - basa ravo raigara rakakwana… uye havana kumbobvira vaita inodarika $ 60ka gore. Sei muimbi achikosha kupfuura mhizha? Ivo vaviri vakashanda hupenyu hwavo hwese pane avo unyanzvi. Ivo vaviri vakakwira kusvika padanho rekukwana rakawana kutariswa nekuremekedzwa nevaya vakavakomberedza. Sei mumwe achiwana mamirioni uye mumwe achirarama nemari?
Iyi mibvunzo mibvunzo iyo indasitiri yemimhanzi inoda kuuya nayo. Iko kugona kwekugovana mimhanzi kuburikidza nehunyanzvi kunogara kuchitungamira manejimendi kodzero kodzero uye tekinoroji. Chizvarwa chinotevera cheMashandiro eSystem, Instant Nhume, nezvimwe zvichave nechavo peer kugoverana kwevezera uko kusingazotariswe nemunhu wepakati anogona kumhan'arirwa. Ini ndichatora Joe naJoe vagovana rwiyo neni - pasina chero sevhisi pakati.
Iyo RIAA neMimhanzi Indasitiri iri kungorwisa shanduko yeindasitiri. Ivo vanogona kuyedza kurebesa, asi hazvibatsiri.
Zvemagariro Mabhukumaki: Viga uye Tsvaga
Sep 29, 2006 pa 7: 58 AM
"Sei mumwe achiwana mamirioni uye mumwe achirarama nemari?"
Nekuti kunyangwe handaizobhadhara mari yakanaka kuti ndigare ndichiona muchina pabasa, ndaizotengesa mweya wangu nematiketi eRolling Stones.
Ndosaka vakasiyana. Ini, mutengi, ndinozvikoshesa zvakasiyana.